RW Sharmaake oo Maxamed Aadan Jimcaale u magacaabay agaasimaha cusub ee laanta socdaalka Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaRW Sharmaake oo Maxamed Aadan Jimcaale u magacaabay agaasimaha cusub ee laanta socdaalka Soomaaliya
July 27, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Agaasimaha cusub ee laanta socdaalka Soomaaliya, Maxamed Aadan Jimcaale.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dowlada federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa u magacaabay Maxamed Aadan Jimcaale agaasimaha cusub ee laanta socdaalka Soomaaliya.
Aadan ayaa badali doona Janaraal Cabdulaahi Gaafow Maxamuud kaasoo bishii lasoo dhaafay loo magacaabay agaasimaha cusub ee haayada nabadsugida qaranka ee NISA.
Agaasimaha cusub ee laanta socdaalka ayaa horey u ahaa madaxa amniga ee gobolka Banaadir.
October 1, 2016 Wasiir dowlihii madaxtooyada Puntland oo is-casilay
September 27, 2016 Dowlada Soomaaliya oo sheegtay in ugu yaraan 8 dagaalyahan oo Al-Shabaab ah lagu dilay gobolka Jubbada Hoose
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay golaha wasiirada cusub ee uu maanta ku dhawaaqay Raysulwasaare Xasan Cali Khayre. Qoraal kooban oo uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay Madaxweyne Farmaajo ayuu [...]